Dekadda enderskenderun Dekadda ugu weyn ee Dekadda Mersin | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYCoast Mediterranean31 HatayDekadda İskenderun Dekadda ugu weyn ee Dekadda Mersin
19 / 02 / 2020 31 Hatay, 33 Mersin, Coast Mediterranean, GUUD, WADADA, Headline, TURKEY
Dekadda Iskenderun waa tan ugu weyn ee ku tartanta dekeda Mersin.
Mersin Port Turkiga gaadhi mid ka mid ah albaabada ugu muhiimsan ee furitaanka dunida 10 sano ee la soo dhaafay maamulka dekedda Iskenderun, istaagay weerar oo ka dhacay Koonfur-ka!
La wareegida xaquuqda hawlgalka ee 'TCDD İskenderun Port' muddo 2012 sano ah sanadkii 36, LimakPort ayaa gabi ahaanba naqshadeysay oo dhistay Port İskenderun Port. Dekadda, oo lagu magacaabo LimakPort, waa mid ka mid ah marinnada ugu weeyn uguna casrisan uguna waaweyn ee laga isticmaalo Badda Mediterranean-ka, iyadoo leh culeys sanadle ah oo gaaraya 1 milyan oo TEU. Kordhinta awoodeeda maalin kasta oo dhaafa, İskenderun Port waxay noqotay tartamayaasha ugu weyn ee Mersin Port.
Halil Delibaş, oo horay u ahaa kuxigeenka Xoghayaha Guud ee Mersin Chamber of Maritime Commerce (MDTO), wuxuu soo jiitay kororka Dekadda Iskenderun iyada oo maqaal uu ku daabacay qeybta warbaahinta ee qolka, "Majaladda Ganacsiga Badda ee Mersin".
Delbaş wuxuu tilmaamay inay jirto weecitaan bartilmaameedkii 2007 taas oo ay ugu wacan tahay xiisadda dhaqaale ee Dekadda Mersin, oo markii ugu horreysay lagu wareejiyey dekedaha TCDD oo leh 'Wareejinta Xuquuqda Howlgalka' muddo 36 sano ah 12dii oo ay maamusho MIP 2023 sano.
KADIB KADIB MERSIN
Portk Iskenderun waxaa ka go'an inuu sii wado kor u qaadkiisa. Portk Iskenderun, oo soo gabagabeeyey Port Mersin oo ah albaabka Anatolia adduunka, wuxuu sii wadaa weerarkiisa si uu u ballaariyo faylalka macaamiisheeda sida beddel cusub.
Ugu dambeyntiina, Limakport İskenderun wuxuu qabanqaabiyey shir hordhac ah bariga iyo Koonfur Bari Anatolia Gobolka Mardin. Dad aad u tiro badan oo ganacsato ah, shirkadaha saadka iyo shirkadaha gaadiidka caalamiga ah ayaa ka soo qeybgalay kulanka, kaas oo loo qabtay kaqaybgal ballaaran. Kulanku, marka lagu daro bixinta macluumaadka ku saabsan astaamaha İskenderun Limakport, faa'iidooyinka uu u leeyahay Dekadda Mersin, adeegyada ay u fidiso socdaalka Ciraaq iyo faa'iidooyinka dhaqaale, qorshaha horumarinta ganacsiga gobolka ayaa laga wada hadlay.
Isagoo ka hadlayay kulanka, Agaasimaha Guud ee Alexander Limakport Arısoy Day, iridda Habur Border in dekedda kuugu dhow si Turkey iyo dayactir la maalgashi ballaaran Limakport sheegay Port Iskenderun ah faa'iidooyinka ganacsiga.
Arısoy wuxuu yidhi, “Waxay leedahay faa iido ah 15 boqolkiiba qarashka wakaalada hoose ee maxalliga ah, waqti dheeri ah oo firaaq ah oo lagu beddelayo, kharashyada ku habboon CFS (Beddelka) iyo 129 km oo u dhow Xarur Border Gate marka loo eego Mersin,” ayuu yidhi.
“INTEREST OF MERSIN WAA KA SAMEEYAA KA HADALKAAGA EE ISKenderUN”
Maareeye Kuxigeenka Guud ee Dekadda Limakport Iskenderun Mehmet Unlu ayaa sheegay in dekada la qabtay 8 sano ka hor isla markaana la maalgaliyay 750 milyan oo doolar. Waxaad baran doontaa inaad ka heli karto adeeg dekeda ugu yaraan 1 doolar halkii weel ka yar Mersin. Waa mudnaanteena koowaad in aan kordhinno tareenka Ciraaq ee dekedda Limakport Iskenderun. Inaad doorato Dekadda İskenderun bedelkii Mersin wuxuu kuu fidin doonaa fursado badan oo soo jiidasho leh marka loo eego waqtiga, booska iyo soo jiidashada qiimaha. ” (Hadiyad Eroğlu /Mersinhaberc ah)
Maanta Taariikh: July 7, 1939 Iskenderun Port iyo Payas-Iskenderun line…
Kaliya tartanka Tareenka Xawaaraha Sare waa Duulimaadyada Turkish Airlines
Tartanka kaliya ee la leh Tababaraha THY wuxuu ku tartamayaa tareenka xawaare sare leh
Maanta taariikhda: June 14, 1945 Dekadda İskenderun ee Tareenka Gobolka…
Maanta taariikhda: 23 Febraayo 1942 Iskenderun Port ee Maamulka Dimoqraadiga ee Dawladda ...
Maanta taariikhda: 14 June 1945 Iskenderun Dekedda Dawlad Goboleedka ...
Maanta taariikhda: 7 July 1939 Iskenderun Port ...
Habur Xudduudda Xuddunka ah